Wazi njani ukuba abafundi bayayazi indlela yokwenza oko bakufundileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Eyona njongo iphambili yokufunda isekwe ngokulula yintoni ofuna ukuba umyili ayifunde xa ugqibile uqeqesho.
Ukuba kukho nabuphi na ubungqina, imibuzo ekulo kufuneka ijolise kuye okanye kwiinjongo. Sebenzisa le ndlela eneneni iluncedo kakhulu ukufumanisa ukuba ngaba uyilo luphumelele uvavanyo lokusebenziseka okanye hayi.
1 Iikhrayitheriya zovavanyo
2 Iikhrayitheriya zempumelelo
2.1 Ekupheleni kweseshoni, abayili kufuneka babe nako:
Ukuba usebenza kuyilo lwegraphic kwaye unikezela ngolwazi kubafundi abatsha kweli candelo lingakholelekiyo, siza kukunika iingcebiso kwaye oko kukwenza uvavanyo lokusebenziseka, into eza kuza iluncedo kwixa elizayo.
Kuvavanyo lokusebenziseka, kuya kufuneka ukwazi ukubona ukuba kanjani Abathathi-nxaxheba bayakwazi ukugqibezela imisebenzi ebonisiweyoNangona kunjalo, yintoni abafanele bayenze ngokwenene? Ungazifumana njani izinto abazifundileyo? Impendulo ilula, kufuneka bayichaze kwaye xa beyichaze ngokuchanekileyo, ungatsho ngokuqinisekileyo leliphi icandelo loyilo elaphumelela ngokwenene kwaye enkosi kwiindlela zokuphumelela uya kuba nakho ukumisela ukuba ngaba uyilo ngenene luyimpumelelo.
Incwadi enesihloko Uyilo olukhawulezayo lokuFundisa nguGeorge Piskurich, ikunika ukufikelela kuluhlu olusebenzayo, apho isimilo kufuneka khona qala ngeendlela zakho zokuphumelela.
Umzekelo woku ziinjongo zokuqonda, ezinokuthi "zibonise" okanye "iinkcukacha" kwaye kule meko, Akwanele nje ukuba "uqonde"Endaweni yoko, kunyanzelekile ukuba umyili athi, "Oko kukuthi," zeziphi iinkcukacha okanye enze into efanayo ukubonisa, ukubonisa ukuba uyayiqonda nyani.
Kwaye emva koko, kwinqanaba eliphezulu lezithintelo, Umyili kuyakufuneka aphathe ukucacisa okanye ukuhlela yintoni kwinqanaba eliphezulu ibiya kuba "kuyilo" okanye "kuvavanye". Nokuba yeyiphi na indlela ogqiba ekubeni uyisebenzise ukuqala ngempumelelo, uya kuba nakho ukujonga ukuba ngaba abanye babathathi-nxaxheba bathethile okanye benze oko bakuxhasayo. impumelelo yomsebenzi wakho.
Ke xa ucwangcisa uvavanyo lokusebenziseka olulandelayo kwaye ujolise kwimisebenzi, ungaqala ngokubuza into efana nale: «¿Yintoni ekufuneka eyenzile umsebenzisi xa enoyilo oluthile?
Ekupheleni kweseshoni, abayili kufuneka babe nako:
Landela ubuncinci iiyure ezintathu zeprojekthi ethile.
Yenza i-invoyisi yomthengi esekwe kwixesha lokulandela.
Chaza umahluko phakathi kwexesha lokubhalisa nexesha lokulandelela.
Ngokuba nazo ezi Iinqobo zokuphumelela ezi-3, unesiseko esivumela ukuba ube nokuqonda okucacileyo malunga nohlobo lwemisebenzi ekufuneka uyinike abasebenzisi.
Umsebenzi: Umsebenzi onokuwanika abathathi-nxaxheba yile ilandelayo: "Ngoku sele ubhalisile iiyure ezi-3 kwiprojekthi ye-Atlas, kufuneka undibonise ukuba ungazibiza njani iiMveliso ze-Acme ngokusekwe kwixesha lakho lokulandelela".
Qaphela: Iikhrayitheriya zempumelelo aziphathwa ngokufanayo nemisebenzi, kuba imisebenzi inomxholo omkhulu kwaye oku kungenxa yokuba ibhaliwe ukuze abasebenzisi bakwazi ukuyifunda.
Zingafana kakhulu, nangona kunjalo, iikhrayitheriya zempumelelo zezakho, ngelixa i umsebenzi wesikolo owenzelwa abathathi-nxaxheba, ngaphakathi komxholo weseshoni yokusebenziseka.
Ungayibona enye yeefayile ze- Inkqubo yokuphumelela ukuba sikubize ngentla apha, isekwe ekuchazeni into ethile, endaweni yokuba umthathi-nxaxheba agqibe umsebenzi. Kungenxa yokuba yikhrayitheriya yempumelelo, onokuyisebenzisa ukubuza umbuzo wokulandelelana kwisabelo.
Ngale ndlela unokuqinisekisa ukuba imodeli yengqondo yoyilo icacile ngokwaneleyo Abasebenzisi.
Ukucinga ngale ntoSincoma ukuba uqale ngeendlela zakho zokuphumelela Kwaye emva koko uqala ukubhala imisebenzi kunye nemibuzo yokulandela, ukuze ukwazi ukunika abafundi uvavanyo lokusebenziseka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Wazi njani xa uyilo lusilele kuvavanyo lokusebenziseka